Youri Tielemans Oo Ku Wargeliyey Leicester In Uu Tegayo Liverpool Iyo Jurgen Klopp Oo £64 Milyan Oo Gini Dul-dhigay - Laacib
HomeSuuqa Kala IibsigaYouri Tielemans Oo Ku Wargeliyey Leicester In Uu Tegayo Liverpool Iyo Jurgen Klopp Oo £64 Milyan Oo Gini Dul-dhigay
Youri Tielemans Oo Ku Wargeliyey Leicester In Uu Tegayo Liverpool Iyo Jurgen Klopp Oo £64 Milyan Oo Gini Dul-dhigay
Youri Tielemans ayaa ku cadaadinaya kooxdiisa in ay ogolaato dalab ka yimid Liverpool oo gaadhay qiimihii ay Leicester City ku xidhay laacibkan oo ay kooxaha doonaya u sheegtay inay lasoo diyaar-garoobaan £64 milyan oo Gini.
24 jirkan khadka dhexe oo qaab ciyaareed wanaagsan ka muujiyey tartanka qaramada Yurub oo uu ka mid ahaa xiddigaha joogtada ah ee xulka Belgium, waxa uu Leicester City ka caawiyey inay ku guuleysato FA Cup xilli ciyaareedkii hore, isagoo dhaliyey goolkii madiga ahaa ee ay koobka ku qaadeen oo uu waliba meel fog ka toogtay.
Liverpool ayaa bartilmaameed ka dhigatay Tielemans, waxaana tababare Jurgen Klopp uu u arkay inuu yahay beddelka ugu habboon ee laacibkii sida xorta ah kaga tegay ee Goerginio Wijnaldum.
Sida uu qoray wargeyska kasoo baxa Belgium ee Voetbal24, Tielemans ayaa doonaya in uu xilli ciyaareedka dhowaanta bilaabmaya u ciyaaro Liverpool, si ay taasi ugu suurtogashana waxa uu ku cadaadinayaa Leicester City in ay ogolaato dalabka uga imanaya Liverpool.
Reds ayaa dhinaceeda waxay ogolaatay inay buuxiso shuruuddii dhinaca qiimaha ee Leicester ay ku xidhay iibka Tielemans, taas oo ahayd £64 milyan oo Gini.
Youri Tielemans ayaa kaalinta koowaad kaga soo baxay tiro ciyaartooyo khadka dhexe ah oo Liverpool ay isha ku haysay, kuwaas oo ay ka mid ahaayeen Renato Sanchez, Saul Niguez, Florian Neuhaus iyo Yves Bissouma.
Sannadkii 2019kii ayay Liecester City ku iibsatay Tielemans lacag dhan £32 milyan oo Gini, kaddib waqti amaah ahaa oo uu ku qaatay King Power Stadium, waxaana 108 kulan oo uu u saftay uu u dhaliyey 17 gool.